EXO နဲ့ BLACKPINK တို့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမယ်ဆို ပျော်ကြမှာလား? – Trend.com.mm
EXO နဲ့ BLACKPINK တို့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမယ်ဆို ပျော်ကြမှာလား?
Posted on December 14, 2018 December 14, 2018 by Noel
EXO နဲ့ BLACKPINK ဆိုတာ တောင်ကိုရီးယားတစ်ခွင်မှာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့အဆိုတော်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပါ။ဒီနှစ်ဖွဲ့သာ ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပရိသတ်တွေက အတော်လေးပျော်ရွှင်ကြမှာပါ။အတူပူးပေါင်းဖျော်ဖြေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၉ အတွက် ဒါက အကြီးမားဆုံးပူးပေါင်းမှုဖြစ်ပြီး အင်တာနက်တစ်ခွင်မှာလုံးဝရေပန်းစားသွားမယ့်သတင်းပါပဲ။
အခုတောင် ပရိသတ်တစ်ချို့က သူတို့နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေတော့မလားမသိဘူးဆိုပြီး ထင်ကြေးပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထင်ကြေးပေးရလောက်တဲ့ အချက်လေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ သူတို့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့အကလှုပ်ရှားမှုတွေက ဆင်တူသလိုဖြစ်နေတာမျိုး၊သင်္ကေတပုံစံတွေကအစ ဆင်နေတာမျိုး၊ပိုပြီးသိသာစေတာကတော့ EXO ရဲ့မန်နေဂျာ groovechaja က BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Jennie ရဲ့ အင်စတာအကောင့်ကိုသွားပြီး ဖောလိုးလုပ်ထားတာမျိုး၊Blackpink ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ EXO ရဲ့ နောက်ထပ်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ suerte._.sh531 အကောင့်ကလည်းBLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေကို စပြီးဖောလိုးလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဒီအချက်တွေကို ပရိသတ်တွေက သတိထားမိပြီး EXOPINK ဖြစ်လာဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။တရားဝင်ကြေညာချက်မထုတ်ပေမဲ့၊မသေချာသေးပေမဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကတော့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။တကယ်ပဲဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။
EXO နဲ့ BLACKPINK ဆိုတာ တောငျကိုရီးယားတဈခှငျမှာ နာမညျကြျောကွားတဲ့အဆိုတျောအဖှဲ့နှဈဖှဲ့ပါ။ဒီနှဈဖှဲ့သာ ပူးပေါငျးဖြျောဖွမေယျဆိုရငျဖွငျ့ ပရိသတျတှကေ အတျောလေးပြျောရှငျကွမှာပါ။အတူပူးပေါငျးဖြျောဖွဖွေဈမယျဆိုရငျ ၂၀၁၉ အတှကျ ဒါက အကွီးမားဆုံးပူးပေါငျးမှုဖွဈပွီး အငျတာနကျတဈခှငျမှာလုံးဝရပေနျးစားသှားမယျ့သတငျးပါပဲ။
အခုတောငျ ပရိသတျတဈခြို့က သူတို့နှဈဖှဲ့ပူးပေါငျးဖြျောဖွတေော့မလားမသိဘူးဆိုပွီး ထငျကွေးပေးနကွေတယျလို့သိရပါတယျ။ထငျကွေးပေးရလောကျတဲ့ အခကျြလေးတှလေညျးရှိနပေါတယျ။
ဒီနှဈထဲမှာ သူတို့နှဈဖှဲ့ရဲ့အကလှုပျရှားမှုတှကေ ဆငျတူသလိုဖွဈနတောမြိုး၊သင်ျကတေပုံစံတှကေအစ ဆငျနတောမြိုး၊ပိုပွီးသိသာစတောကတော့ EXO ရဲ့မနျနဂြော groovechaja က BLACKPINK အဖှဲ့ဝငျ Jennie ရဲ့ အငျစတာအကောငျ့ကိုသှားပွီး ဖောလိုးလုပျထားတာမြိုး၊Blackpink ရဲ့ ပရိသတျဖွဈမှာပေါ့လို့ပွောလို့ရပမေဲ့ EXO ရဲ့ နောကျထပျမနျနဂြောတဈယောကျဖွဈတဲ့ suerte._.sh531 အကောငျ့ကလညျးBLACKPINK အဖှဲ့ဝငျတှကေို စပွီးဖောလိုးလုပျထားခဲ့ပါတယျတဲ့။
ဒီအခကျြတှကေို ပရိသတျတှကေ သတိထားမိပွီး EXOPINK ဖွဈလာဖို့ စိတျလှုပျရှားနကွေပါတယျ။တရားဝငျကွညောခကျြမထုတျပမေဲ့၊မသခြောသေးပမေဲ့လညျး ပရိသတျတှကေတော့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။တကယျပဲဖွဈလာမလားဆိုတာတော့ ဆကျပွီးစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါပဲ။
ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ချစ်သူအကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ Cha Eun Woo